Ergaa Waggaa haaraa 2012
Published: Wednesday, 11 September 2019 15:20
Waldaa Kiristiyaanaa Warra Wangeelaa Makaana Yesus
Waggaa Haaraa bara 2012 ilaalchise Ergaa Presidentii biraa darbe.
Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura QulqulluuttisWaaqayyo tokko; Ameen!
Waaqayyotti kan jaallatamtan Ummata biyya keenyaa hundumaaf;
Lammiiwwan biyya alaa jiraattaniif
Akkasumas Mana Yaalaatii fi Mana Amala Sirreessatti kan argamtan hundaaf.
Akkasumas hordoftoota amantii Kiristiyaanaa maraaf.
Hunda dura, Waaqayyo keenya isa nagaa fi fayyaatti nu eegee bara 2011 gara 2012tti nu ceesisef galannii fi ulfinni haa ta’u jechaa hundumaa keessaniiniyyuu baga bara haaraa kanaan isnin ga’e jechuudhaan Hawwi gaarii maqaa Waldaa Kiristiyaanaa Warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itiyoophiyaatii fi maqaa kootiin isiniif dabarsuun jaalladha.
Akka Macaafni Qulqulluun dubbatutti, Bara Bishaan Badiisaa sana booddee Waaqayyo Nohaadhaaf akkana jedhee kakuu gale:
Egaa hamma bara lafti kun itti jiraatutti midhaan facaasuunii fi sassaabuun; dhaamochinii fi ho’I; bonnii fi ganni; guyyaanii fi halkan ittuma fufu malee hin dhaabatan (SU 8:22).
Kakuun Waaqayyo Nohaaf gale kun kakuu ilmaan namaatiif itti fufee jiraatuu dha. Arfaasaa fi yeroon makaraa; gannii fi bonni; akkasumas halkanii fi guyyaan wal gegeeddaraa jiraachuun isaanii kakuun Waaqayyoo akka hin jijjiiiramne agarsiisa. Nus bara darbe kana jijjiirama walii-galaa kana keessa darbinee bara haaraa kanatti ce’uu danda’uun keenya arjumma Waaqayyootiin waan ta’eef isaaf galata galchina.
Barri dhufuufi darbuun, yeroonis wal jijjiruun ofii isaatiin hiikaa hin qabaatu. Yeroon yoo akka isaaf malutti itti jiraatan duwwaa yeroo jedhamee waamama. Waaqayyo yeroo arjummaa isaatii fi ,ayyaana isaatiin yeroo kennaa godhee ilmaan namaatiif kenneerra. Kennaa Waaqayyoo kana fedhii gaariidhaan akkasumas yaada itti gaafatamaan guuteen ittiin hojjechuun ni mala. Yeroon galfata; galfata kana nyaachuun Waaqayyo duratti akka nama gaafachiisu beekuun ni mala.
Barri darbe waan gaggaarii akkuma qabatee ture haalotta nama yaaddessanii fi abdii nama kutachiisanis keessumsiiseera. Isa gaarii ta’eef; hojii gaarii baricha keessatti raawwachuu dandeenyeef gamaduun akkuma jiru, hammeenya isa keessa turaniifis gaabbuun ni mala. Qooda gaarummaa hammeenyi; qooda jaalalaa jibbi, qoodha arjummaa doqnummaan keessatti wal jijijjiiraa akka turan beekamaadha. Yaadni gaarii fi qajelinni you jiraate, barri amma simanne kun carraa fi abdii gaarii ta’a. Yaada qajeelina hin qabneen jireenya itti fufuuf yoo yaalame garuu kan duraarra haalli hammachuu danda’u akka jiru hubatee namni hundi gaarummaa filachuun ni malaaf jennee ammanna.
Haalli nageenyaa fi tasgabbii biyyaa keenyaa amma kallattii gaariirra jirraachuun isaa daran kan nama gammachiisuu dha. Haa ta’uu iyyuu malee, haalli gaariin kun hundee gadi fageeffatee akka itti fufuuf lammiiwwan biyyatti akka gurmuuttis haa ta’u akka dhuunfaatti shoora irraa eegamuu gumaachuu irraa eegama. Jeeqqamni bifa adda addaatiin biyyattii irratti midhaa geggeessaa ture akka itti hin fufneef, caalaadhumattuu garaa-garummaa qomoo fi amantii hubannaadhaan fi ogumaan qabuudhaan waliin jirreenya irratti xiyyeffannaa akka godhaniif saboota biyya keenyaa hundaaf Waldaan Kiristiyaanaa keenya waamicha gooti. Maatiiwwan bakka jirreenya isaanii irraa buqa’anii gidiraa keessa turan amma gara naannoo isaanii fi qee isaaniitti deebia’anii jireenaya haaraa jalqabuun isaaniis guddaa kan nama gammachiisuu dha. Haa ta’u malee, jireenya maatiiwwan kanaa deebisanii ijaaruu irratti mootummaa duwwaa utuu hin ta’in sabni biyyatti hundii irratti birmachuu qaba.
Nama hundaa dura carraan jireenyaa diriiree jira. Carraan kun garuu carraa ta’uu kan dandaa’u namni hundumtuu yeroo Waaqayyo isaaf kenne keessatti hojii jireenya jijiiru irratti xiyyeeffannaadhaan yoo bobba’e, qofaadha. Caalaadhumatti hoji-dhabdummaa fi hiyyuma xiqeessuuf fala kan ta’u hojii hojjechuu duwwaa waan ta’eef namni hojjechuu danda’u hundi dandeettii isaa fi beekumsa isaa waliin qindeessuun dhama’uun akka malu yaadachiisuun jaal’adha.
Sadarkaa qulqullina barnootaa fooyyessuu irratti sochii godhamaa jiru Waldaan Kiristiyaanaa keenya xiyyeeffannaadhaan hordofaa jirti; karaa danda’ame hundaanis deggersa gochuuf fedhii qabdi. Kanaan wal qabatee garuu namusa baruu fi barsiisuu irratti hir’inni mulataa jiru daran kan nama gaddisiisu ta’uu isaas ibsuun jaalladha. Barattoonni barumsa isaanii irratti haalaan xiyyeffachuu dhabuu irraa kan ka’e yeroo qormaataatti waan ta’uu hin malle dalaguun mul’ataa jira. Kun immmoo gama maatiitiin hir’inni akka jiru agarsiisa. Caaladhumatti bara darbe keessa qormati biyyoolessaa hatamuudhaan miidhaan ga’e daran gaddisiisaadha. Haalli kun akka itti hin fufneef maatiiwwan ijoollee isaaniif gochuun kan malu dursanii akka itti yaaduun isaan irraa eegama.
Duulli biqiltuu dhaabuu ganna darbe geggeeffame bifa hundaan biyya keenyatti abdii horeera. Duulli kun amalleefatamee akka itti fufu ta’e, biqiltuuwwan dhaabaman kunuunsuunis xiyyeeffannaa akka argatu ni yaadachiifna. Lammiiwwan biyyattii waliin ta’uu fi xiyyeeffannaadhaan yoo waliin hiriiran jijiirama gaarii fiduun akka danda’amu duula kana irraa barnoota argatu jennee amanna.
Barri kun kan nagaa, kan jaalalaa, kan eebbaa fi kan badhaadhinaa isiniif akka ta’un hawwa; ayyaanichis ayyaana ulfina qabeessaa fi kan gammachuu isiniif haa ta’u. Baga ittiin isin ga’e!
Waaqayyo biyya keenya haa eebisu, haa eegu, nagaa isaas isheef haa baayyisu.
Luba Yoonaas Yiggazuu
Prezidaantii WKWW Makaana Yesuus.